ဖူးနုသစ်: အချစ်တစ်ခုတည်းနှင့် (၂)
ကျွန်မ လေ..မဖြစ်နိုင်ဘူး..မဟုတ်ဘူး..လို့ အကျယ်ကြီးအော်ပြီး shock ရိုက်တဲ့စက်က လက်ကိုင် နျစ်ခုကို ယူပြီး သူ့ကို အဆက်မပြတ် အရူးတပိုငး် shock ရိုက်နေမိတယ်။ စိတ်ခြောက်ခြားပြီး လန့်ကုန်တဲ့သူနာပြူဆရာမတွေ ကျွန်မကိုကြည့်ပြီး အလန့်တကြားနဲ့ တခြားဆရာဝန်ကို ပြေးခေါ်ကြတယ်။ သဲူရဲ့ ခနွာကိုယ် ဟာ ကျွန်မရဲ့ ရှော့ရိုက်ချက်ကြောင့် မြောက် မြောက်သွားတယ်။
ကျွန်မသိနေတာကတော့ကျွန်မ သူ့ကို အသက်ရှင်နေစေချင်တယ်။ တချိန်လုံးကျွန်မတို့ အချင်းများနေကြလဲ .သူကျွန်မကို ချစ်စကားမပြောရသေးလဲ.ကျွန်မတို့ချစ်နေကြပါတယ်။ သူျကျွန်မကို ကဒ်ပေးဘို့အကြွေးကျန်ပါသေးတယ်။ သူသေလို့မဖြစ်ဘူး..ကျှန်မ shock ရိုက်တဲ့ လက်ကိုင် နျစ်ခုကို လွတ်ပစ်ပြီး သူ့နျလုံးသားရှိရာ ကို အမြန်ဆုံး. လက်နျစ်ဘက်နဲ့ နျိပ်ပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ လက်အစွမ်း ဖိနိုင်သလောက်. ဖိြ့ပိီး သူ့အသက်ှရူဘို့ကို လည်း အဆက်မပြတ်ဆုတောင်းနေမိတယ်။ ဒါပေမံဲ့သူ မလှူပ်ဘူး..နာတယ်လို့တောင် မပြောဘူး. မျက်စိကိုပိတ်လို့ ဘာမှ မတုံ့ြ့ပန်ခဲ့ဘူး။
ကျှွန်မမိတ်ဆွေ ဒေါက်တာ ဂျှီအန် က ကျွန်မကို စိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့တွနး်ဖယ်လိုက် တယ်။ ကျွန်မ ဘာအသံမှ မပြူနိုင်တော့ဘူး. ငိုလို့သာဘဲ နေမိတော့တယ်။ သူအသက်မရှိတော့ဘူး..သိတ်နောက်ကျသွားပြီ..ငါစိတ်မကောင်းပါဘူးလို့ ဒေါက်တာ ဂျှီအန် ကကျွန်မကို ပြောတယ။် ဒေါက်တာ ဂျှီအန် က သူ့့ကိုကောင်းကောငး်သိပါတယ်။ ကှျွန်မ မိတ်ဆက်ပေးဘူးတယ်။
သူသေလို့မဖြစ်ဘူး..မဖြစ်ဘူး..ကှျွန်မအော်မိပြန်တယ်။ စိတ်ကိုထိန်ူးပါ မိန်းကလေးရယ်။မင်းလည်း ဆရာဝန် တစ်ယောက်ဘဲ..ဒေါက်တာ ဂျှီအန် ကဖြောင့်ဖျ လည်းကျွန်မ မထိန်းနိုင်ဘူး..ကှျွန်မ လူထဲကလူတစ်ယောက်ပါ.ဒီအချိန်မှာ ဆရာဝန်မဟုတ်ပါဘူး.. သူ့ကို အတင်းလှူပ်မိပြန်တယ်။ နိုးထလာဘို့တောင်းပန်နေမိတယ်။ ကျွန်မ တောင်းဆိုချက်တွေ မဖြစ်ခဲ့ဘူး..အဲဒီနေ့့က ချစ်သူများနေ့ဖြစ်ခဲ့တယ်
နောင်ပိုင်းသူ့မိတ်ဆွေတွေ ကပြန်ပြောပြတယ်။ အဲဒီနေ့ကသူ ကျွန်မကို ဆက်သွယ်ဘို့ပြန်ကြိုးစားတာ မရလို့ လိုက်လာရင်းနဲ့ အဲလိုဖြစ်ရတယ် ဆိုတာ သိခဲ့့ရတယ်။ ကျွန်မရဲ့ ကဒ်ကလေးတစ်ခုကိုတောင်းဆိုမှူကို မလိုက်လျောမှူ ဆိုတဲ့့ကလေးဆန်လှတဲ့ အမှူနဲ့ချစ်သူကို ကျွန်မ ဆု့းရှုံခဲ့ရတယ်။
အခုတော့့ျကှျွန်မမှာ ကြောင်ကလေးတစ်ကောင်ရယ် ..သိတ်မသုံးဖြစ်တဲ့ကွန်ပြူတာ တစ်လုံးရယ် ဒါဘဲ အဖော်ရှိပါတယ်။ ကြောင်ကလေးကို ချီထားရင်းကျွန်မ ကွန်ပြူတာ ကို ငေးကြည့်နေမိတယ်။ အဲဒိအချိန်မှာဘဲ ကြောင်ကလေး အတွက် နို့သွား ယူပြီးပြန်ရောက်လာတဲ့အခါ ကှျွန်မ ့ွကွန်ပြူတာထဲ မှာ စာ အစောင် ၁၀၀ ရောက်နေတာ ကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ ဒမ်….ဘုရားသခင်..ကှျှျျွန်မဆီကို ဘယ်ကနေပြီး စာ ၁၀၀ အမှူျိက်တွေ ကို ပို့လိုက်ပါလိမ့်။။ ့ွကွန်ပြူတာနားကပ်ကြည့်လိုက်တယ်။ တကယ်ကို စာ ၁၀၀ ရောက်နေတာပါ..ဘယ်သူက မျာ.း .ကျွန်မ delete လုပ်ဘို့ကြိုးစားလိုက်တယ် ဘယ်သူက ဒီစာအစောင် ၁၀၀ ကိုဖတ်နိုင်ပါ့မလဲ။။
ဖျက်လို့မရပါလို့ ..မနက်ဖြန်မှသာလျျင် ဖျက်နိုင်ပါမယ်။ system error ဖြစ်နေတယ် ဆိုတာနဲ့ကျွန်မ စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ စာတစောင် ကို ဖှုှုွွင့်လိုက်မိတယ်။ ပထမဆုံ နျင်းဆီပန်းလေးတပွင့်နဲ့ လှပတဲ့ တီးလုံးကလေး က ကျွန်မကို နှူတ်ဆက်တယ်။ only love ဆိုတဲ့စကားလုံးကလေးက ကျွန်မကို ………………
ကောင်းခန်းမှာ ဘာလို့ ဖြတ်လိုက်တာလဲလို့
မမကတော့ လုပ်ပြီ... တော်လိုက်တာ.. အဲ့ဒါ တကယ့် ဇာတ်လမ်း အဆက်လား.. ဆက်ရေးကြပါဦး
မမက သူ့ပို့စ်ကျ စာ ၂ ကြောင်းလောက်ပရြေးတယ်..
ဒီမှာကျ ပို့်စ် ၁ ပုဒ်စာ မန့်ထားတယ်...။
မဂွိစ် ။ ဆက်ပြီး ဘာသာပြန်ပေးလို့ ကျေးဇူး အရမ်းတင်ပါတယ်။ မခင်ဦးမေ ဆက်ရေးထားတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ မူရင်းက ဒီမှာပါ။
တကယ့် ဇာတ်လမ်းအဆက်ပါ. ညက zt ကို ပြသာနာလာရှာလို့ သူက link ပေးတာကို သွားဖတ်ပြီး ဘာသာပြန်တာပါ။ ကျန်တာတော့ပိရသတ်ဘဲ ဆက်ဘာသာပြန်ပါတော့လေ. သူပြောတဲဲ့ အတိုငး်ပါဘဲ
Anonymous Above -> လင့်ခ်ကလေး ပေးလို့ ရမလား မသိဘူး။ မနိုင်းနိုင်းရဲ့ ဘလော့ခ်ထဲမှာ ကျွန်တော်ရှာ မတွေ့လို့ပါ။ ကျေးဇူးပဲ
သူက ကျွန်မရဲ့ ဆံပင်တွေကို ဆွဲရတာကို နှစ်သက်တတ်ပါတယ်။...
2 ယောက်ဘာသာပြန်တော့ အရသာ2မျိုးဖတ်ရတာပေါ့။
မမကေအိုအမ်နဲ့ဆို3ယောက်။
အစ်မသွားရှာသေးတယ်။ နိုင်းနိုင်းစနေမှာ ရှာလို့မတွေ့ခဲ့ဘူး။
ရှိမှာပါ ကျနော်ကသူ့ပို့စ်တွေကိုသေချာဖတ်ပါတယ် မအားလို့ လင့်မရှာပေးနိုင်တာပါ
you can find on this link. thanks
တွေ့ပြီ။ ကျေးဇူးပဲ မနိုင်းနိုင်း။